Malunga nathi - Hangzhou Qianrong Ukuzenzekelayo Izixhobo Co., Ltd.
Ukubambelela "kugxininiso kwisicelo se-ultrasonic, ngokuthembekileyo ukuphumelela abathengi, ukuphumelela igama lomgangatho" nenjongo yophuhliso, ukuba ngumthengisi ophambili kwihlabathi wezinto eziphambili ze-ultrasonic, ngenqanaba lethu lobungcali kunye nemizamo engapheliyo, iimveliso ezisemgangathweni zabathengi uphuhliso lweshishini ukwenza ukubuya kwexabiso okukhulu.
I-Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. isebenza kwishishini lokuthumela ngaphandle le-transducers ye-ultrasonic kunye noMatshini wokuwelda we-ultrasonic kwihlabathi liphela kumazwe angaphezu kwama-40.
Njengomthumeli kumazwe angaphandle wamacandelo eengcali ze-ultrasonic, iQsonic inamava emveliso ebanzi kunye nolwazi oluphambili, ke siqinisekile ukuba sinokuhlangabezana neemfuno zakho. Kwangelo xesha, iimveliso zethu zisengqiqweni kakhulu kwixabiso kunye nomgangatho ophezulu, ukuze abathengi bethu bagcine inzuzo yokhuphiswano.
Ngophuhliso lwenkampani, sineqela elihle. Sinikezela kungekuphela ngemveliso esemgangathweni, kodwa nezinto ezenziwe ngokwesiko ngokusekwe kwimizobo eneenkcukacha okanye iisampulu.
I-QRsonic ibonelela ngeenkonzo ezininzi ze-OEM kubathengi bayo. I-logo yomthengi inokuprintwa kwi-ultrasonic transducer nakwizixhobo ze-ultrasonic.
Sijonge ngokunyanisekileyo kweli thuba lokukukhonza kwaye ube liqabane lakho kungekudala. Masisebenze kunye ukudala imbuyekezo enkulu yexabiso kuphuhliso lweshishini kunye neemveliso ezisemgangathweni.